Oriọna mkpuchi nke eji ọla kọpa chọọ ya mma - cm. 65 x 25 x 30h - (DFL) - Dafne Italian Design
Elu ụlọ oriọna mma na ọla kọpa epupụta - cm. 65 x 25 x 30h - (DFL)
Home shop ọkụ Chandeliers Elu ụlọ oriọna mma na ọla kọpa epupụta & # 8211 ...
Home / shop / ọkụ / Chandeliers / Elu oriọna mma na ọla kọpa epupụta - cm. 65 x 25 x 30h - (DFL)
Elu ụlọ oriọna mma na ọla kọpa epupụta - cm. 65 x 25 x 30h - (DFL) buru ibu
okporoko: 806881881826 Category: Chandeliers Product ID: 20040
Akpanwu oriọna mma na epupụta - Akụkụ cm. 65 25 x x 30h - Socket ụdị E14 - Max wattage 40 - 2 Number nke Ìhè - Type bọlbụ HSGSC / G - Class m - IP 20 - Star ọkụ Usoro - Nnọọ Mkpa: Ndi ike agbanyụrịrị. Arụ ọrụ niile ga - arụ ọrụ site n'aka onye ọkachamara pụrụ iche - Ngbanwe ma ọ bụ ime ihe ike nwere ike ime ka ngwaọrụ ahụ dị ize ndụ. The ụlọ ọrụ na-anabata ibu ọrụ ọ bụla maka mmebi kpatara ya onwe ngwaahịa ruo eruo bụghị dị na ntụziaka. (DFL)
chandelier nwere kristal na oriọna ikanam-oriọna aja. 75 x 20 x 90h - dakọtara na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Chandelier - n'uko oriọna 6 ọkụ - ọdịdị ifuru - na ígwè ma na-arụ ọrụ iko - nchịkọta adịghị etinye - Akụkụ: cm. 65 x 35 x 125h (STL)
Chandelier na oriọna candshade - Na-ejikọta na klaasị bọlbụ; A, A +, A ++ - (UL)
Chandelier na mkpara - Kwadoro na klas klọb; A, A +, A ++ - (UL)
Ọfụfụ na-egbuke egbuke na-acha ọcha ntụgidere eriri - (UL)
Chandelier na kristal na lampshade - cm. 45 x 45 x 95h - (DFL)
Chandelier na eriri mkpofu ntụ - (UL)
Elu ụlọ oriọna mma na ọla kọpa epupụta - cm. 70 x 20 x 70h - (DFL)
okpokoro oriọna na kristal - Dita 40 cm. - Style: Omuma - Kwadoro na klas nkpuchi; A, A +, A ++ - (DFL)
Ngwunye ọkụ elekere 3 na-acha ọkụ na-acha odo odo - (UL)
283€ Aggiungi al carrello
Oriọna ụmụaka maka nwa nwanyị ma ọ bụ nwa - oriọna na-eji akwa na-acha odo odo na-acha odo odo na ihe eji achọ mma - ọkụ atọ chandelier - Dimensions: 47 cm H 64 cm 42 cm - [Series: Dafen-Flowers] - (DF11)
Okpokoro chara acha odo odo na kristal na lampshades - (DFL)
Ogige ụlọ na-egbuke egbuke na kristal kristal - Ogwe ọkụ - (DFL)
Okpokoro ebe nchekwa / ọkụ ọkụ 3 ọkụ - Kwadoro na klas bọlbụ; A, A +, A ++ - (UL)
Chandelier na isi awọ candshade mma na butterflies na okooko osisi - cm. 35 x 35 x 130h - (UL)
Ejiri chandelier na-ekpo ọkụ na wicker lampshade - (UL)